जीवनमा एक उज्ज्वल घटना विवाहको उत्सव हो। अनि निस्सन्देह, यो कार्यमा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका अतिथिहरु द्वारा खेलेका छन्, प्रत्येक जसले प्रत्येकलाई नववर्षको लागि उपहार दिए। तिनीहरू विभिन्न चीजहरू दिन्छन्।
धेरै मानिस साँच्चै उनीहरूको जीवनमा नयाँ परिवारलाई मदत गर्न चाहन्छन्। "सफा स्लेट" सँग केहि सुरू गर्न निकै गाह्रो छ। यही कारणले गर्दा अतिथिहरूले नववाहितहरूलाई यस्तो उपहार बनाउन खोज्छन्, ताकि तिनीहरू दैनिक जीवनमा भविष्यमा उनीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। तथापि, तपाइँ अचम्मको खरिद गर्नुभन्दा पहिला, तपाईंलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ कि कसैले अरूलाई दिनेछैन। भविष्यका विवाहित महिलाहरूको आफन्तसँग परामर्श गर्नु राम्रो हो। यो सुन्दर बेड लिनन, कुनै आवश्यक गृह उपकरणहरू, भान्सा सेट वा भाँडाको सेट हुन सक्छ। उपयोगी प्लड, कालीन वा सुन्दर र मूल विवरणहरु को लागि आंतरिक।
यदि हालैका लागि उपस्थित अतिथिहरू विवाहित परम्पराहरूको अवलोकन हो, तिनीहरू सामान्यतया नववार्डहरूलाई कसरी दिने भन्नेबारे सोच्दैनन्। तपाईं कुनै पनि ट्रिंकसेट यस्तो उपहार बन्छ। यो एक आउटडोर भाँडा, एक तस्वीर, एक इजरायल वा इनडोर फूल हुन सक्छ। सामान्यतया, सबै केहि कि सुरक्षित तरिका मा मेज़जानिन वा प्यान्ट्री मा धूल हुनेछ। पैसाको साथ लिफा - यो नववार्डहरु को लागि सबै भन्दा सामान्य र धेरै प्रतिभाशाली उपहार हो। यद्यपि, यद्यपि यो एक सामान्य अवस्थित छ, तर उसले निश्चित रूपमा आवश्यक चीजहरूको खरीद वा गर्भनिष्ठ महिलाहरूको गर्भनिरोधक कार्यको लागि जान्छ।
कोही कोही अतिथिहरू बीचमा उभिन चाहन्छन्। यस अवस्थामा, नववर्षको विवाहको लागि मूल उपहार बनाउन आवश्यक छ। र यो एक धेरै महंगी वर्तमान हुन सक्छ, र केवल असामान्य चीजहरू जुन महान् महंगा हुँदैनन्। यसबाट, सबैले "gasp" मात्र प्रस्तुत गर्छन्। यस उपहार खरिद गर्न धेरै समय खर्च गर्नु पर्छ। यो एक घर शराब, एक विशेष चीनी मिट्टी के बरतन सेट या विवाह को बारे मा शिलालेख संग टी शर्ट को मूल सेट हुन सक्छ। न्यूयड्स निश्चित रूपमा नौका, कार वा नयाँ अपार्टमेन्टसँग खुसी हुनेछन्।
अन्तमा, कसैलाई छाप्न चाहन्छ कि नववार्डहरू उनीहरूको जीवनमा कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन्। यस अवस्थामा, कुनै पनि मनोरञ्जन भ्रमण गर्न वा पर्यटक यात्रा पनि हेर्न उत्कृष्ट विकल्प एक उपहार प्रमाणपत्र हुनेछ। सबै पछि, चाँडै वा पछि, तर उपहारहरू बिर्साउन सकिन्छ, तर छापहरू कहिल्यै मोलमेलमा जाने छैनन्।
विवाहलाई के गर्ने छैन
नववर्षका लागि आश्चर्य छान्नु भएको बेला, यो तथ्यलाई मार्गदर्शन गर्न आवश्यक छ कि केहि उपहारहरू उपहारको रूपमा खरिद गर्न सिफारिश छैन:
चाकू, दर्पण वा घडीहरू दिन आवश्यक छैन। त्यहाँ धेरै चिन्हहरू छन् जुन त्यस्ता प्रस्तुतिहरूको प्रस्तुति निषेधित गर्दछ। तर अझै पनि म नवविद्याहरू आनन्दित हुन चाहन्छु। यसबाहेक, यदि उत्सवका सतावटहरू अन्धकारवादी व्यक्ति हुन्, यो अझ राम्रो छ कि यस्ता उपहारहरू समेत आफ्नो मानसिकतालाई असर नगर्ने।
यो तथ्यलाई ध्यान दिन लायक छ कि विवाह एक छुट्टी हो, दुवै पतिको लागि उत्सव। न्युवड्सको लागि उपहार छनौट गर्नुहोस् जस्तो कि उनले एक मात्र मनपर्छ - गलत स्थिति। त्यसो गर्दा, दुलो र दुलही दुवैको स्वाद र चासो राख्दै। चरम अवस्थामा, तपाइँ दुई चीज दिन सक्नुहुन्छ जुन आफ्नो पति र पत्नीलाई अलग देखि प्रस्तुत गरिनेछ।
यो धर्मसँग सम्बन्धित केहि चीजहरू खरीद गर्न सिफारिस गरिएको छैन। उदाहरणको लागि, सबै प्रकारका गोबिन्सहरू झूटो विश्वासको प्रतीक हुन्, र चिनियाँ पैसाको पेटीहरू एकदमै फरक धर्म हुन्। त्यस्ता विकल्पहरू टाढा टाढामा छोडिन्छन्।
यो राम्रो छैन कि उपहार को नयाँ बच्चाहरु लाई भविष्यका बच्चाहरु को लागी चीजको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएन। पहिलो, यो प्रेमीहरूको छुट्टी हो। और दोस्रो, दुल्हन सम्झौता गर्न को आवश्यकता छैन। अचानक उनको "रोचक" पदलाई गोप्य राखिएको थियो।
यसले नबिर्सिदिने कुन कुरामा ध्यान दिदैन कि नववार्डहरू भविष्यका बगालहरूको छनौट हुनेछ। मुख्य कुरा यो हो कि भविष्यमा प्रेमीहरूको जीवन सँगसँगै यो उपयोगी र आवश्यक हुनुपर्छ।
14 फरवरी को केटी को लागि उपहार
मूल र सुन्दर तरिकामा कसरी उपहार प्याक गर्ने?
शिक्षकलाई उपहार दिनुहोस्
सुँगुरको संसार: कहाँ इत्र खरीद गर्न उत्तम छ
वेलेंटाइन डे को उपहार: उपहार विचार
नयाँ उत्पादन र यसको पदोन्नति को तरिका
मर्सिडीज CLA 45 AMG: AMG देखि सबै भन्दा बजेट पालकी बारेमा सबैभन्दा रोचक कुरा
बारम्बार हाइलाइट - केश को स्वास्थ्य कसरी संरक्षण गर्न।
"चम्किलो पहाड": शुल्क माछा मार्ने। "चम्किलो पहाड": फोटो र समीक्षा
क्रैन्कशाफ्ट सेन्सर: किन तल खण्डन र यसलाई कसरी विस्थापन गर्न?
अल्बर्टा मा क्यानाडा, स्वागत आप्रवासी
व्यवहार र शरीर शुद्ध गर्न मौरी उत्पादनहरु
माछा मार्ने सामान: उपकरण को प्रकार, सही चयन, स्थापना
को स्नान मा काठ र ठोस तल्ला
Meizu M2 नोट: विनिर्देशों, समीक्षा
के बनाउन-अप अन्तिम कल मा?